ခရမ်းသီး ၊ရုံးပတီသီးနဲ.ပဲတောင့်ရှည်ရခိုင်ချက် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Saturday, January 11, 2014 Taunzalat
ပုစွန်ခြောက်......၁ဇွန်း ( ထမင်းစားဇွန်း )
ဆား+ ဟင်းခတ်မှုန်. အနည်းငယ်စီ
ပထမဦးဆုံး ငပိနဲ.ငရုတ်သီးစိမ်းတွေကိုရေခမ်းအောင်ပြုတ် ၊အအေးခံပြီး ထောင်းထားပါ။
ရုံးပတီသီးကို ၂ပိုင်း (သို.) ၃ ပိုင်းလောက်လှီးဖြတ်ပါ။
ဒန်အိုးတစ်လုံးမှာ ခရမ်းသီး၊ ပဲတောင့်ရှည် ၊ ရုံးပတီသီးတွေနဲ.အတူ ပုစွန်ခြောက်ထောင်း ၊ ငပိ ၊ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန်.တို. ထည့်ကာ ရေအနည်းငယ်